ချစ်ကြည်အေး: ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီတော် ဖူးကြစို့
ညီမလေး Wed May 25, 10:35:00 PM GMT+8
အလွမ်းပြေ အလွမ်းမပြေ ဆိုသလိုပဲ ချစ်ချစ်ရယ် ... စစ်ကိုင်းကို လွမ်းတယ် ။။။
sonata-cantata Wed May 25, 10:55:00 PM GMT+8
တရံခါက ခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ရေမြေတောတောင် သဘာဝအလှတွေကို...
ချစ်ကြည်ရဲ့ စိမ်းညို့ညို့ မှိုင်းပြာမှုန်ရီ အလင်္ကာအရေးအသားတွေနဲ့ တွဲဖက်လို့ ထပ်မံခံစားရင်း
သက်ဝေ Wed May 25, 11:12:00 PM GMT+8
အဲဒီနေရာကို သဘောကျလိုက်တာ... ဓါတ်ပုံတွေလည်း လှတယ်...။
စစ်ကိုင်းတောင်ကို ငယ်ငယ်တုံးကပဲ တခေါက် ရောက်ဖူးတယ်... ဘာမှ မမှတ်မိတော့ဘူး...း((
ဇွန်မိုးစက် Wed May 25, 11:15:00 PM GMT+8
မရေ... ပုံလေးတွေ သိပ်လှတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် ချစ်နေမိတာပါပဲ အစ်မရေ။ ဆွမ်းဦးပုညရှင်ပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးစ်။း)
မင်းဧရာ Wed May 25, 11:18:00 PM GMT+8
ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီတော် နှင့်အတူ စစ်ကိုင်း မန္တလေး ရှူ့ခင်းတွေကိုကြည့်ပြီး အလွမ်းဖြေခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
ခနွဲ Thu May 26, 01:51:00 AM GMT+8
အလွမ်းပြေ ကြည့်သွားတယ်။ ရောက်ဖူးတယ်။ အဲဒီကို။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) Thu May 26, 01:58:00 AM GMT+8
အဝေးကပဲ အလွမ်းပြေ ကြည့်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူး အမရေ ...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Thu May 26, 03:17:00 AM GMT+8
ခုတော့ အစ်မကျေးဇူးနဲ့ ပြန်ဖူးလိုက်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်
စော(အဝါရောင်မြေ) Thu May 26, 08:59:00 AM GMT+8
ပလောင်တွေလည်း ခါးမှာ ငွေကွင်း ဆင်တယ်နော်။ ခုမှပဲ တွေ့ ဖူးတယ်။ ရိုးရိုးဝတ်တဲ့ ပလောင်ဝတ်စုံပဲ တွေ့ ဘူးတာ။
An Asian Tour Operator Thu May 26, 10:26:00 AM GMT+8
အစ်မချစ်ရဲ့ အောက်စတန်းဒန်းရှော့ တွေပါလား။ စစ်ကိုင်း ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးလွမ်းမိ သွားပါတယ်ဗျာ။
နေ၀သန် Thu May 26, 11:21:00 AM GMT+8
စစ်ကိုင်းကို အရမ်းသဘောကျတယ်.. အေးချမ်းနေတာပဲ.... အခွင့်ရှိခဲ့ရင် ဆွမ်းဦးပုညရှင်ကိုလည်း သွားဖူးမြော်ချင်ပါသေးတယ်...
SHWE ZIN U Thu May 26, 11:46:00 AM GMT+8
ညီမ ချစ်ကြည် ရေ
မရောက်တာတောင် ကြာသွားပြီ ချစ်ကြည်အေး ရဲ့ လက်ရာလေး ကြည့်ပြီး ပြန်လွမ်းသွားပြီ ပုံလေး တွေကလည်း ကောင်းပါ့ဗျာ
လင်းဒီပ Thu May 26, 02:39:00 PM GMT+8
နားနားပြီး ဖတ်ပါ့မယ် :)
မိုးယံ Thu May 26, 03:00:00 PM GMT+8
ပန်းချီ Thu May 26, 04:19:00 PM GMT+8
ဌာနေပြည်ကြီးကဝေးသနှင့်း( ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး ပြန်ချင်စိတ်တောင်ပေါက်မိတယ် မမရေ..။
ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာမှာပဲ ဒီလိုအလှမျိုးတွေရှိတယ်လို့ ခံစားမိနေသကိုး..(ဇွတ်)း))
မြစ်ကျိုးအင်း Thu May 26, 11:28:00 PM GMT+8
တပြည်လုံး ခရီးထွက်လိုက်ရတာ အားရစရာပါပဲ မချစ်ရေ။
T T Sweet Fri May 27, 09:32:00 AM GMT+8
စစ်ကိုင်းမှာ နေတုံးကတော့ ခဏခဏရောက်တယ်။ အဘွားတို့ အိမ်က တောင်ခြေမှာဆိုတော့ စစ်ကိုင်းတောင်ကတော့ တက်ဖြစ်တယ်။ ခုတော့ မရောက်တာကြာပြီ။ လွမ်းစရာလေးတွေ ... ...
Anonymous Fri May 27, 10:35:00 AM GMT+8
မြင်သာလှမ်းမြင်ဖူးတာ တခါမှရောက်ဖူးဘူးရယ်.. ဘုရားဖူးခွင့်ရသွားပြီ ကျေးစ် တီကြည်..
Mon Petit Avatar Fri May 27, 03:59:00 PM GMT+8
Thank you Ma Ma CKA for sharing the amazing trip's memories!!!!
Cameron Fri May 27, 06:05:00 PM GMT+8
နားနားပြီးဖတ်ရင်း မေ့မေ့သွားတယ်....မြန်မြန်လေးရေးပါ ဒါပဲ....
ချစ်ကြည်အေး Fri May 27, 09:56:00 PM GMT+8
ညီမလေး>>အမချစ်လည်း လွမ်းတယ် တခေါက် ပြန်သွားချင်တယ်....:)
သီတာ>>ဘုရားဖူးသွားလို့ သာဓု သာဓု သာဓုပါ သယ်ရင်း:)
သူငယ်ချင်း သက်ဝေ>> ပြန်ရင် သွားဖြစ်အောင် သွား၊ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ဖြစ်အောင် ရိုက်ပါ...:)
တူတူပဲ ညီမဇွန်>> ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် ချစ်နေတော့တာပဲ...:)
လာလည်စာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ ကိုမင်းဧရာ...:)
ခနွဲနဲ့ ကိုအောင်>> အလွမ်းပြေတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်...:)
ဒါပေါ့ ရွှေချောရဲ့ ရိုက်တဲ့သူ တော်တာ မှန်၏....ခွိ...:)
စော>> ဟုတ်တယ် သူတို့ကွင်းတွေက အပျော့တွေလိုပဲ...:)
ကိုသောမတ်စ်>> ဟုတ်ပါ့ အပြင်မှာ မတ်တတ်ရပ်နေသော ရိုက်ချက်များပါပဲ...:)
နေဝဿန်>> အမလည်း စစ်ကိုင်းကို သဘောကျတယ် သွားဖြစ်အောင် သွားဖူးပါ...:)
အမဇင်>> တူတူသွားကြမယ်လေ နော်...:)
ကိုလင်းဒီပ>> ဟိုအကိုင်းနားလိုက်၊ ဒီအကိုင်းနားလိုက်လား ဟမ်...:P
ညီမပန်းချီ>> ဒါပေါ့ တခြားမှာ ဘယ်ရှိမတုန်း ပြန်သာပြန်....:)
မောင်မြစ်>> မရောက်ဖူးရင် သွားဖြစ်အောင် သွားဖူးပါ။ အမက ဒါတောင် အချိန်နဲလို့ တချို့နေရာတွေ မရောက်ခဲ့ရဘူး...:)
ဆွိ>> ဟုတ်တယ် အနေအထားကိုက လွမ်းစရာလေး....:)
ယူအာ ဝဲလ်ကမ်း သားတွန်...:)
ညီမMPA>>you are welcome sis:)
မိုး>> ဟုတ်ပါပြီတော် လက် မော်တာတပ်ရေးပါ့မယ် အိုခေ...:)
အားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါသည်ရှင် :))))